China abụọ akaghị gafere osimiri elu rụpụta na ụlọ ọrụ | XY Tower
A naghị ele ụlọ elu anya naanị dị ka ngwaahịa, kamakwa dị ka ọrụ. Site na ịbịaru elu, ịgha ụgha, ịgbakọta akụrụngwa ọ bụla na nnyefe nke ngwaahịa ahaziri, XY Tower dị ugbu a na ọnụọgụ uru niile.
Ndị Injinia na-enyere aka belata ụgwọ ọrụ ahụ maka ndị ahịa anyị site na ịmegharị Towerlọ Elu kachasị elu ma hụkwa na izi ezi nke ndozi nhazi ka ewepugharị mmezi saịtị.
ọgụgụ isi n'ichepụta na n'ọtụtụ ebe etinyere anyị osisi. Njikwa ngwongwo sitere na sistemụ ERP yana usoro nrụpụta niile bụ sọftụwia Industrial. Gha bụ kpọmkwem site engineer nke ụlọ ọrụ.
100% Ihe Akụrụngwa Achọpụta site na Billets ruo Tlọ Elu Emechara. Anyị na-eji 100% anwalele Billets si naanị ala nwere Osisi Nchara.
Nkwado siri ike na Laboratories Nnwale
Kacha mma na ngwugwu & nhazi usoro iji Waya Weaving na Metal Strapping iji hụ ngwa ngwa Ndepụta Ngwaahịa na efu ụkọ ihe na saịtị
Usoro nhicha ahụ na ntanye ọzọ maka mbupụ mbupu
Na Skipper Limited, anyị na-enye ndị ahịa anyị ụdị ngwaahịa dị iche iche dị iche iche sitere na 66 KV ruo 800 KV Towers (Single Circuit, Double Circuit, Multi-Circuit Towers kwesịrị ekwesị maka Twin, Triple, Quad or Hex Conductor configurations). Anyị nwere ike ịnye ihe ụlọ elu dịka nke India yana akara mmụta mba ofesi sitere na BSEN ruo ASTM na GOST.
Volta ọkwa 110-330kV
Elu ọnụ 18-55m
Ọnụ ọgụgụ nke onye nduzi na-eduzi 1-8
Akụkụ niile nke ụlọ elu na-agabiga igwe haịdrọlik nwere ọtụtụ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche dịka ịkwa afụ ọnụ, ọkpọ ọkpọ na ibelata. Igwe hydraulic tinyere ngwaọrụ ndị dabara adaba, jigs na ihe ndozi na-ahụ na a na-edozi ihe ndị gbagọrọ agbagọ na-enweghị mgbagwoju anya. Ebumnuche edoziri nke ọma na-eme ka njikwa ihe dị mfe karịa enweghị ndị ọrụ ọ bụla. All igwe na-onwem hazie ígwè ime dị iche iche nkọwa eg ISO, ASTM, JIS, DIN.
Nke gara aga: 500kV nje elu
Osote: Power Dabara Adaba-osisi gbalaga